Ezona Robhothi zintle zeNtengiso ye-Forex-Fumana isikhokelo esipheleleyo sikaJanuwari 2022
Funda ii-2 zoRhwebo ze-Forex zeRobhothi
Kulabo kuni abangakhange bayithathele ingqalelo irobhothi ye-forex, yindlela entle yokwenza umvuzo wokungena. Iirobhothi ze-Forex zifana nomncedisi wakho, usebenzisa iiparameter esekwe kwangaphambili, imigaqo kunye nohlalutyo lobuchwephesha ukuthenga nokuthengisa endaweni yakho.
Ukuba uluhlobo lomtyalomali ongafuniyo ukuphakamisa umnwe emva koko irobhothi iya kwenza lonke uphando kunye nohlalutyo kuwe. Oku kwaziwa njenge 'automated ngokupheleleyo' kwaye kuya kuqhuba urhwebo ngokuzenzekelayo.
Ezinye iirobhothi ze-forex zikuvumela ukuba uzisebenzise njengenkqubo esizenzekelayo. Oku kunokuthetha ukuba iqonga lenza umsebenzi womlenze, likuthumelele ukuthenga okanye ukuthengisa uphawu kwaye emva koko uthathe isigqibo malunga nento oza kuyenza ukuya phambili.
Sibeke ndawonye isikhokelo esipheleleyo kwiirobhothi zangaphambili, ezibandakanya izinto abazenzayo, izibonelelo kunye nemingxunya. Sikwadibanise ezi-5 zeerobhothi eziphambili ze-2021 ukuba uziqwalasele namhlanje.
I-FX Fury Forex Robot -Zenzekelayo kwiiRhafu zakho zeMali
Isekwe kwaye ithembekile kwimeko yeerobhothi
Iziphumo eziqinisekisiweyo kwiMyfxbook
Umgangatho wokuphumelela we-93%
Intlawulo yokuhlawulela kube kanye-akukho mfuneko yentlawulo eqhubekayo yenyanga
Ndwendwela i-Forex Fury
Zithini iiRobhothi ze-Forex?
Xa kuza ku Forex yorhwebo, Inxalenye enkulu yenkqubo kukunikezela ixesha lokujonga utshintsho kwiintshukumo zorhwebo lwemali. Ungayichazanga eyokugcina iindaba ezisemgangathweni kunye nezoqoqosho.
Abanye abatyali mali bahlala ixesha elizeleyo kurhwebo kwaye banokuzinikezela iiyure ezisi-8 ngosuku kuphando kunye nokwenza intengiso ngaphakathi. Ngakolunye uhlangothi, abanye abantu abazange bathengise kwi-forex.
Abanye baswela nje ixesha lokufunda i-ins kunye nokuphuma kweetshathi kwaye bezama ukuhlala besazi ngeendaba zamva nje. Yilapho iirobhothi ze-forex zingena khona. Emva kwayo yonke loo nto, siphila kwihlabathi elikhawulezayo nelixakekileyo- iinkqubo ezizenzekelayo zikhawuleza ukuthandwa.
Inani elandayo labathengisi be-forex basebenzisa ezi nkqubo zinobunkunkqele, njengoko benakho ukwenza urhwebo lwe-forex ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ngaphandle kokuba wenze into.
Into ekufuneka uyenzile kukubonelela ngemali ngediphozithi, kwaye uyakwazi ukuhamba malunga nosuku lwakho lobomi bemihla. Irobhothi yakho ye-forex inayo yonke into ephantsi kolawulo.
Zisebenza njani iiRobhothi zangaphambili?
Ngamafutshane, irobhothi ye-forex sisixhobo sokurhweba esisebenzisa ii-algorithms ecaleni kohlalutyo lobuchwephesha. Iirobhothi zijongisa imarike ye-forex xa zikhangela urhwebo olunokuba yinzuzo.
Njengoko besitshilo oku kunokusekwa kuseto lwangaphambili izicwangciso zorhwebo okanye inokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo kubathengisi be-forex abanamava.
Njengoko siza kuthetha kancinci kamva, enye yeenzuzo ezibonakalayo zokusebenzisa irobhothi ye-forex ukurhweba kukungabikho kweemvakalelo zorhwebo, kunye nokubanakho ukuba kwibhola 24/7.
Izibonelelo zeerobhothi zangaphambili
Njengoko usazi ngoku, iirobhothi zangaphambili zikwenza ukuba urhwebe ngokuzenzekelayo. Ukuba awusele urhawuzelele ukuqala, ke apha ngezantsi sidwelise ezinye zeenzuzo eziphambili zokusebenzisa irobhothi ye-forex.
Isibonelelo esikhulu sokusebenzisa i-forex ye-robot kukukwazi ukwenza inani elingenasiphelo lophando ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe. Uninzi lwabatyali mali abanamava badla ngokugxila kwiiklasi ezimbalwa zeasethi. Imvakalelo ngokubanzi kukuba kungcono ukufumana ukuqonda okufundisiweyo kwabambalwa abakhethiweyo.
Oku ikakhulu kungenxa yokuba ekubambeni izinto ngezinto ezahlukeneyo akunakulindeleka ukuba ube nexesha elaneleyo lokuphanda ngokupheleleyo ngeasethi nganye. Ngokubalulekileyo, ukudityaniswa kokwahlulwa kweeasethi kwisikhokelo kuya kuba yinkqubo enzima ukuyilawula.
Kwelinye icala, xa kufikwa kwiirobhothi ze-forex, azithintelwanga ngendlela abezakuba ngayo umntu oyityala. Irobhothi inokujonga amawaka eemarike ngexesha elingenalo uxinzelelo konke konke ekusebenzeni kwayo.
Ukungabikho kweemvakalelo zoRhwebo
Nawuphi na umrhwebi onamava uyazi ukuba iimvakalelo ezintathu zorhwebo - uloyiko, ukubawa kunye nethemba- zizinto zokugcina iso lijongile.
Utyalomali lunokujika ngokukhawuleza ukuba uvumela iimvakalelo zikulawule. Ngokwenza njalo, unokuzifumanisa usenza izigqibo ezingenangqondo. Oku kunokuba neziphumo ezibi kwipotfoliyo yakho yotyalo-mali.
Le yenye yeendlela irobhothi ye-forex enokuba yingenelo ngayo, njengoko ichanekile kwaye isengqiqweni ngoyilo-amanani aqokelelweyo kunye nokwenza 'izigqibo' ngaphandle kwemvakalelo. Inkqubo icwangciselwe ukulandela iimeko zokucinga ngoko ayinakuze yenze urhwebo olungenangqondo.
Ukuthengisa iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-7 ngeveki
Iirobhothi ze-Forex zikhanya apha nazo. Ewe kunjalo, thina bantu sifuna ukulala kunye nokuphumla ukuze sisebenze ngokufanelekileyo kwaye senze izigqibo ezizizo kubomi bethu bemihla ngemihla.
Masithi ungumthengisi wexesha elizeleyo osisicwangciso-qhinga semihla ngemihla kukuzinikela iiyure ezi-5 kuphando lweemarike ezifanelekileyo, kunye neeyure ezi-4 ezisebenza ngokufumanisileyo.
Ngelixa usuku lweyure ye-9 lunokuba luncedo kwaye uyakwazi ukwenza ubomi obuhle. Khawufane ucinge ukuba ubunokuma njani ukuze uzuze kwangolo suku ukuba ubunokwazi ukuphanda nge-24/7?
Ngelixa kufuneka sibuyisele kwaye sihlaziye kwakhona, iirobhothi zangaphambili zingabona kwiimfuno zakho zotyalo-mali egameni lakho - iiyure ezingama-24 ngosuku, kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki.
Oku akuncedi kuphela kubarhwebi abanamaxesha okusindisa usuku, kodwa nakubantu abanobomi obuxakekileyo abangafuni ukubeka emngciphekweni wokufumana izibonelelo ezithile.
Iluncedo kubarhwebi baseNewbie
Olunye uncedo lokusebenzisa irobhothi ye-forex kukuba abatyali mali banakho ukufikelela kwimarike enkulu yehlabathi, ngaphandle kokuchitha iinyanga bephanda kwaye befunda ukuba bathengisa njani. Ngokwesiqhelo, le nkqubo inokubanzima kakhulu, ngamanye amaxesha ithathe iinyanga ezininzi ukuze uyiqonde ngokupheleleyo intengiso.
Irobhothi ayizukuvumela kuphela ukuba uthathe inxaxheba kwindawo yotyalo-mali. Kodwa, makwenziwe kukudlula kwisidingo sokufunda kunye nokuqonda imeko yamaxabiso, izikhombisi zobuchwephesha kunye neetshathi. Zonke ezi zinto zibalulekile kurhwebo lwe-forex.
Nangona kunjalo, kuba itekhnoloji ekuthethwa ngayo yenziwa ngokuzenzekelayo, ungathatha nje isihlalo sangasemva kwaye uvumele irobhothi ye-forex ukuba ithenge kwaye ithengise ii-asethi egameni lakho.
Zenza malini iindleko zeerobhothi zangaphambili?
Impendulo yalo mbuzo ayisiyonto ilula, njengoko iirobhothi zorhwebo zangaphambili ziyahluka ngokwexabiso ngokwamagama. Ezinye zezi nkqubo zisebenza kwisakhelo esisekwe kwikhomishini. Oku kuthetha ukuba iqonga ekuthethwa ngalo liza kuthatha ipesenti eqinisekiswe kwangaphambili kuyo yonke intengiso eyenziweyo eyenzelwe wena.
Umzekelo, masicinge ukuba iqonga olikhethileyo linenqanaba lekhomishini eli-12%:
Siza kuthi utyale imali eyi- $ 3,000 kwi-robot ye-forex
Iirhwebo ezili-100 zenziwa ngenyanga
I-ROI yi-15% elingana ne- $ 450
Ngoku iqonga liza kuthatha ikhomishini yayo eyi-12% eyi- $ 54
Uya kusala ne-396 yeedola kwinzuzo
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngolu hlobo lwemodeli yekhomishini kukuba umboneleli uya kwenza imali kuphela xa izinto zihamba kakuhle.
Oku kuthetha ukuba ngowona mnqweno umboneleli uzama ukonyusa i-ROI yakho ngokukubeka ngononophelo. Okukhona inzuzo enkulu kumboneleli weerobhothi ikwenzela yona, kokukhona bemi ukuze bazuze.
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka uhlawule umrhumo othe tyaba ukuze ufumane iirobhothi zangaphambili. Uyakufuna emva koko ukufaka iirobhothi kwiqonga lomntu wesithathu njenge MT4 okanye MT5. Akusayi kubakho mirhumo eqhubekayo okanye iikhomishini, njengoko sele uthengile isoftware engaphantsi.
Eyona nto iphambili apha kukuba awuyi kuzuza kulondolozo oluqhubekayo. Oko kukuthi, iimarike ze-forex zingatshintsha ngokukhawuleza okukhulu, oko kuthetha ukuba ababoneleli ababalaseleyo be-forex baya kuqhubeka ngokuhlaziya ikhowudi engaphantsi.
Ngaba iirobhothi zangaphambili ziScam?
Kukho amawaka ababoneleli beerobhothi zangaphambili phaya. Uninzi lwabanikezeli beenkonzo 'ngamaxabiso okuphumelela aphakathi kwe-80% kunye ne-90%, kunye nembuyekezo enkulu yenyanga.
Aba ngababoneleli ekufuneka ubabukele, njengoko banokuba ngabaqhatha. Aba barhwaphilizi banikezela iirobhothi ezisebenzayo, kodwa ukubonelela ngesiqinisekiso esiyimpumelelo sokuphumelela akunakwenzeka.
Ngelishwa kwabanye, bafumanisa kuphela ukuba izithembiso zokuphumelela okuphezulu azinasiseko, emva kokwahlukana nemali abayisebenzele nzima. Elinye icebiso liya kuba-ukuba libukeka lihle kakhulu ukuba lingaba yinyani- mhlawumbi kunjalo. Nangona kunjalo, awudingi ukuyibhala kwangoko.
Umbono olungileyo kukujoyina kuphela ababoneleli abanikezela ngeedemo zasimahla, izilingo okanye isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ukuba awonelisekanga. Okungenani ngale ndlela, awuzivuli emngciphekweni wokuphulukana nesixa semali oyisebenzele nzima, kuphela ukufumanisa ukuba yayiyirobhothi ye-forex yomgunyathi.
Ungayikhetha njani iRobot ye Forex
Kuya kufuneka uqhubeke ngononophelo xa ukhetha irobhothi ye-forex, ubuncinci kuba kuye kwakho iimeko ezininzi apho amabango enziwe ngumboneleli weerobhothi ajika abe bubuxoki. Kukho amawaka aphuma phaya, kodwa ngaphezulu koko kamva.
Kweli candelo, sigubungela into ekufuneka uyazi xa ukhetha i 'all-in' service. Oko kukuthi, awuyi kucelwa ukuba ukhuphele okanye ufake i-MT4 / MT5 kwaye emva koko usete irobhothi ngokwakho. Endaweni yokuba aba baboneleli bakucele ukuba wenze idiphozithi kwaye konke okunye kuyakhathalelwa.
Njengoko uyazi ngoku, kukho into ebonakalayo xa kufikwa kwindlela ngokuzenzekelayo irobhothi ye-forex ingaba. Kuya kufuneka ucinge malunga nendlela ofuna ukurhweba ngayo, oko kuthetha ukuba ufuna ukubandakanyeka kangakanani kwinkqubo yokwenza izigqibo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Ngaba ungathanda ukufaka imali emva koko unikezele iintambo kwi-forex ye-forex? Ungahlala phantsi kwaye uvumele irobhothi ye-forex ukuba yenze yonke into enokuyenza ngorhwebo-ukuphela kokuphelisa inkonzo ukuze uthethe.
Okanye mhlawumbi ungathanda ukubamba ulawulo oluthile? Abanye abatyali mali bathanda ukusebenzisa irobhothi ye-forex ukwenza uphando ngokuzenzekelayo kwaye benze umsebenzi womlenze kuloo nto.
Emva kwexesha, xa kuziwa ekubekeni urhwebo ungalinda umqondiso kwaye emva koko uthathe isigqibo sokuba uqhubeke kwaye wenze ngalo. Ngamanye amagama, vula okanye uvale indawo, okanye utshintshe ukuthatha inzuzo okanye uyeke ukulahleka kwesikhundla esele sikhona kurhwebo.
Ekugqibeleni, kuhlala kucetyiswa ukuba ujonge iqonga labanikezeli abathile ukuze ubone ukuba zeziphi iipateni zokurhweba ezisetyenziswa yirobhothi yangaphambili.
Yintoni idipozithi encinci?
Abanye ababoneleli beerobhothi ze-forex bachaza idipozithi encinci ngaphambi kokukuvumela ukuba ufikelele kwinkonzo. Unoko engqondweni, ingumbono olungileyo ukujonga ukuba yeyiphi eyona dipozithi encinci, kwaye mhlawumbi ukhethe enye enesixa sokuqala esincinci.
Kuya kuphazamisa kakhulu ukutyala i- $ 3,000 yemali yakho, ukufumanisa kamva ukuba ngumboneleli weerobhothi wenkohliso. Ngokubanzi, kuya kufuneka ulindele idiphozithi ubuncinci eyi- $ 250. Ukuba ufumana iqonga elinesiqinisekiso sokubuyiselwa imali ukuba awonelisekanga kwiintsuku ezingama-30, oko ke luphawu olulungileyo.
Ngaba aMabango oMboneleli avumelekile?
Ukwenza izithembiso zokubuyisa iipesenti ezingama-80 rhoqo ngenyanga kulula. Emva kwayo yonke loo nto, phantse nabani na unokwenza iwebhusayithi ibenokwenza ibango elikhohlakeleyo kwezi ntsuku. Ukuba ixabiso libonakala ngathi libiza ngobuhlanya kwaye lihle kakhulu ukuba lingaba yinyani, ngamathuba kunjalo.
Ukuba umboneleli we-forex ubonelela nge-95% 'yembuyekezo eqinisekisiweyo' kunye neenkcazo ezinkulu zenzuzo enkulu ngomngcipheko ophantsi- sesinye isilumkiso esibomvu sokukrokrela.
Njengoko sigubungele ngokufutshane ngaphambili, kuhlala kulungile ukuhamba neerobhothi zangaphambili ezinikezela ngesiphumo sokuqinisekiswa. Amanye amaqonga azimisele ukubonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali, abanye banokukunika uvavanyo lweentsuku ezi-7 zasimahla okanye idemo.
Iidemos lukhetho olufanelekileyo kuzo zombini ii-newbies kunye nabathengisi abanamava ngokufanayo, kuba uyakwazi ukuzama imiqondiso ezenzekelayo ngaphambi kokuba uchithe nantoni na. Unokujonga ukungqinelana komboneleli ngokufunda iziphumo zokuvavanya.
Oku kubonisa ukuba zeziphi iindlela zorhwebo ezisetyenzisiweyo ngempumelelo okanye ngenye indlela kwixesha elithile. Okungakumbi malunga noko kamva. Inkampani esemthethweni iya kuba nakho ukwenza amanani kunye neziphumo zifumaneke ngokulula kubathengi, kunokuba zikhulise ngentengiso ekrelekrele kunye nezithembiso ezinkulu zobutyebi obukhawulezayo.
Ngaba Ungayifumana Imali Yakho?
Into yokugqibela ofuna ukubethelwa ngayo lixesha elide lokuhlengwa. Kuhlala kungumbono olungileyo ukuqinisekisa ukuba umboneleli weerobhothi we-forex uya kukuvumela ukuba ufikelele kwimali yakho nanini na ufuna, ngaphandle kwemida yokurhoxa. Soloko ujonga imigaqo kunye neemeko.
Zeziphi iindlela zokuKhetha ukuhlawula?
Ayizizo zonke iirobhothi ze-forex ezifanayo. Abanye, umzekelo, bavumela kuphela iidiphozithi / ukurhoxiswa kwii-cryptocurrensets. Ngokukodwa ukuba unendlela ethile yokuhlawula engqondweni (njengeVisa), kuya kufuneka uqiniseke ukuba ujonga olu lwazi ukuqinisekisa ukuba iqonga liza kufaneleka.
Zeziphi iimali endinokuzenza ukuRhweba?
Iirobhothi ezahlukileyo ze-forex zigxile kwiibini ezahlukeneyo zemali. Ungafumanisa ukuba ivavanya iimfumba zeebhangqa ezinje ngabantwana, ii-majors kunye ne-exotic. Ngelixa abanye banokuvavanya kuphela izibini ezimbalwa.
Kubalulekile ukuba nomfanekiso opheleleyo xa kufikwa kwiingxowa-mali zakho kwaye ziphi utyalomali.
Kukho ezinye izinto ezimbalwa onokuzivavanya kwimfuno yakho yokufumana iirobhothi zakho ezigqibeleleyo ze-forex.
Ngaba iRobot ye-Forex ibuye yavavanywa kwakhona?
Ukuvavanywa kwakhona kuya kukunika isalathiso esihle sendlela esebenza ngayo le nkqubo kunye neemeko ezahlukeneyo zentengiso ezinje ngeendaba ezibalulekileyo, ukungazinzi okuphantsi kunye nokuphakama okuphezulu kunye nezibhengezo.
Isandla seRobot, uku-odola kwikhibhodi yelaptop, urhwebo lotshintshiselwano. Inkqubo yorhwebo lweRobot yinkqubo yokurhweba ngekhompyuter engenisa ngokuzenzekelayo urhwebo kutshintshiselwano ngaphandle kongenelelo lomntu. Ubunzulu bentsimi kugxilwe emnweni.
Amaqonga angcono avavanywa umva kwiibini ezahlukeneyo zemali kunye nezinye iimeko zentengiso. Ezi mvavanyo zihlala zibonisa ubuncinci bokuncipha, ukuphumelela okunokubakho kunye nelahleko, kunye nomvuzo womvuzo. Abanye abarhwebi baya kukwenzela olu vavanyo.
Ulwazi loRhwebo oluPhila
Uninzi lwabanikezeli beerobhothi ze-forex benza izithembiso zokuphumelela kwe-90- 99%. Nangona kunjalo, oku akusoloko kunjalo. Siza kucebisa kuphela iinkampani ezisemthethweni kwindawo yeerobhothi.
Iziphumo zinokwahluka xa kufikwa 'kurhwebo lwexesha lokwenyani' kunye 'nokuthengisa okulingisiweyo', njengoko iiparameter zamva zinokulawulwa ngokungqongqo. Oku kuthetha ukuba ayibonisi ukuthengiswa kwezinto ezinokubakho, ezinokubaluleka kurhwebo lwexesha lokwenyani.
Ngaba kukho ukuLinganiselwa kweMida?
Olunye uqwalaselo yindlela irobhothi ye-forex esebenza ngayo xa utshintsha ubungakanani beodolo yakho. Indlela elungileyo yokuvavanya oku kukuzama idemo okanye isilingo sasimahla.
Amanye amaqonga asebenza ngcono xa unamathela kwiodolo efanayo, kodwa inokunciphisa inzuzo yakho xa kukho utshintsho kubungakanani beodolo. I-robot efanelekileyo ye-forex enye isebenza kakuhle kungakhathaliseki.
Ukuhla kweRobot ye-Forex
Ukwahlulwa ngumahluko phakathi kwendawo esezantsi elandelayo kubhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo kunye nendawo ephezulu. Ngokusisiseko umahluko kwimali eseleyo yeakhawunti yakho ubonakalisa ingeniso elahlekileyo yokuphulukana namashishini.
Akukho babarhwebi mabini banye, njengabanye abantu abathanda ukwehla okuphezulu kwe-15%, ngelixa abanye benokuthi bathande ukwehla okulondoloziweyo kweepesenti ezi-5 kuphela.
Oku kuxhomekeke kuwe. Ungakujonga oku kuzo zombini izinto ezilandelelanayo kunye nakurhwebo ngorhwebo.
Uqala njani ngeRobot ye-Forex
Ngoku siza kuqhuba yonke into oyifunayo ngaphambi kokuba ungene ngemvume kumboneleli weerobhothi zangaphambili. Olu lwazi luzakuseta kwindlela elungileyo ukusuka ekuhambeni.
Inyathelo 1: Khetha uMboneleli weRobot ye-Forex
Ukufumana ukuqengqeleka kwebhola, kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi irobhothi ye-forex onqwenela ukuyisebenzisa. Ukuba awukwazi ukufumana umboneleli ohlangabezana kakuhle neemfuno zakho, sixoxa ngeerobhothi eziphambili ze-2021 ezantsi kwesi sikhokelo.
Inyathelo 2: Thatha isigqibo malunga nokuThengiswa koRhwebo
Kumaqonga athile eerobhothi, kukho iindlela ezahlukeneyo zokurhweba onokukhetha kuzo. Olu luhlu luvela kwiintlobo zeeasethi zemali onokufuna ukufikelela kuzo, kulwazi lokuthatha inzuzo kunye nokumisa ilahleko.
Ukuba umtsha kwihlabathi yorhwebo ntengiso emva koko inkonzo ezenzekelayo iya kuba yinto ebhetele kuwe. I-robot ye-forex iya kuthengisa ngoko akudingeki.
Kwaye njengoko besichukumisile ngaphambili, ukusebenzisa iakhawunti yedemo okanye nokuba ulingo lwasimahla yindlela elungileyo yokuziqhelanisa noseto.
Inyathelo 3: Faka enye imali kwaye uqalise ukurhweba
Ngoku ubhalisile, ungaqhubeka kwaye ubeke imali. Njengoko besesitshilo, amaqonga ahlukeneyo amkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula.
Ukuthatha ukuba sele ukhangele ukuba yintoni ekhoyo kuwe. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyazi ukuba yeyiphi eyona dipozithi encinci. Nje ukuba wonwabe kwaye wenze idipozithi yakho yokuqala, uya kuqala ukufumana imiqondiso Forex.
Nceda uqaphele ukuba ukuba uthathe isigqibo sokuya kunye neakhawunti yesandla, kuya kulindeleka ukuba ubeke ubugcisa ngokwakho. Ukuba uthatha isigqibo sokuzenzekelayo, awunyanzelekanga ukuba wenze enye into.
Ukuthenga i-Forex Robot yeMT4 / MT5
Kuyenzeka ukuba uthenge ngokulula irobhothi ye-forex kumboneleli we-Intanethi, emva koko ukhuphele isoftware kwikhompyuter yakho. Emva koko, kufuneka ulayishe ifayile yesoftware kwi-MT4 / MT5. Ngokwenza njalo, irobhothi iya kuqala ukurhweba kwangoko.
Unako, ewe, ukuseta iiparameter ezithile zorhwebo. Oku kuyakubandakanya iimetrikhi ezinje ngobuncinci bobukhulu bakho kunye nobukhulu bezorhwebo. Ukuba ukhetha le ndlela, ungcono ukuqhuba iMT4 / MT5 kwimowudi yedemo kangangeeveki ezininzi ukuqinisekisa ukuba irobhothi ilungele injongo.
Ungayibonisa njani i-Forex Broker esemthethweni
Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka ubhalise kwi-forex broker ethembekileyo ukuba unqwenela ukusebenzisa irobhothi. Emva kwayo yonke loo nto, irobhothi iya kufuna iqonga lokwenza imisebenzi yayo!
Indlela elungileyo yokujonga ukuba semthethweni kwenkampani ye-forex yomrhwebi kukuqinisekisa ukuba ibhalisiwe kwigunya lolawulo.
Iinkampani zokwenyani kufuneka zisebenze phantsi kwemithetho engqingqwa yamaphepha-mvume kwaye ziqinisekise ukuba abathengisi bahlulahlula imali yabarhwebi. Oku kuqhelekile kumacandelo amaninzi kwaye kuthetha ukuba inkampani kufuneka igcine imali yakho yahlukile kwimali yeshishini ngokwalo.
Ngokomthetho, ii-brokers zinyanzelekile ukuba zibeke ngaphambili iingxelo ezichaza umsebenzi wazo. Imizimba elawulayo iya kuthi ke ijonge kwaye ihlolisise idatha. Kwimeko yokudlala intlonti, le mizimba iphakathi komthetho ukunyanzelisa iziphumo kumrhwebi ekubhekiswa kuye.
Kukho ngeenxa zonke abalawuli be-forex abangama-20 kwihlabathi liphela. Ezinye zezona zaziwa kakuhle zezi:
I-FCA: Igunya lokuZiphatha kwezeMali (United Kingdom)
I-CFTC: Izinto zorhwebo kunye Urhwebo lwexesha elizayo IKomishoni (eUnited States)
I-ASIC: Ikhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTyalo-mali
ICySec: Ikhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano
IBaFIN: IBundesanstalt yefür Finanzdienstleistungsaufsicht (eJamani)
Thina kuFunda 2 urhwebo sincoma kuphela abarhwebi be-forex abalawulwa kakhulu.
Eyona Robot ye Forex ye2021
Kukho amakhulu ukuba ayingomawaka ababoneleli ababonelela ngeerobhothi zangaphambili - uninzi lwazo nakala ngathi iziphumo ezimangalisayo.
Ngale nto siyithethileyo, sikulumkise kakhulu malunga nemingxunya enokubakho xa ukhetha i-forex ye-forex engalunganga, ke ngoku siza kudwelisa iirobhothi eziphezulu ze-5 ukuze uqwalasele i-2021.
Oku kuyakuba yenye yeerobhothi ezaziwa kakhulu zoluhlu lwethu. Yenza ukuthengisa kwemihla ngemihla ngomngcipheko ophantsi kunye nesicwangciso esiliqili sendlela. Ubuninzi bezentengiselwano nangaliphi na ixesha li-7, kwaye amashishini aya kugcinwa evulekileyo kuphela ixesha elifutshane.
I-FX Fury yi-scalper enezithintelo zexesha kwaye isebenza kwishedyuli yexesha le-M15. Ngokukodwa kule minyaka imbalwa idlulileyo, le robhothi ibonakalise amandla okuziqhelanisa neerandi zemali zamva nje.
Ngexesha lokubhala, iqonga linezibuyekezo ezingaphaya kwamashumi amathandathu ngokuzenzekelayo, eziqhubeka nokukhula. Umboneleli weerobhothi unikezela ngeedemo ezingenasiphelo kwilayisensi nganye, oko kuthetha ukuba unokuvavanya kangangoko ufuna okanye ufuna.
Unokufuna nje i-robot ye-forex ukuba isebenze 'njenge-check-checker' kwimisebenzi yakho yorhwebo. Kodwa ezinye zezinto onokuzilindela kwi-FX Fury robot zezi zilandelayo:
Umyinge wepesenti yokuphumelela ye-93%
Iminyaka eli-15 yenzuzo ebuyileyo ye-466,725%
10 amashishini okanye ngaphantsi
Umthengisi we-MT4 uyahambelana
Ukuphuhlisa iminyaka emi-5
I-100% iAkhawunti ye-Myfxbook eQinisekisiweyo
Ngaphezulu kwe-2,500 yabantu abaqhuba iFX Fury kwiiakhawunti zabo yonke imihla, kwaye njengabanikezeli abaninzi beerobhothi abadumileyo be-forex kukho uhlaziyo olongezelelekileyo ngonyaka.
I-Forex Steam 10 iyasebenza ngokuzenzekelayo. Uyakwazi ukukhuphela irobhothi ye-forex kwaye intle kakhulu ukuba iqale ukurhweba kuwe ngokuthe ngqo ebhokisini.
Ukuba uhambele phambili ngakumbi kwintengiso ye-forex unokumisela ngokulula kwaye ulungiselele irobhothi ukuba ithengise kwiimeko zakho ezithile. Oku kwenza ukuba ubambe kulawulo oluncinci, kodwa sebenzisa irobhothi ye-forex kuphela apho ufuna khona.
I-Robot ye-Forex Steam ibonakala ngathi ikhula ngokukhawuleza kwaye ithathwa njengenokuthenjwa kwaye inokwethenjelwa. Ewe kunjalo, ngokurhweba kwangaphambili, akukho ziqinisekiso, kodwa ukuba nesiseko esinyanisekileyo kubathengi luphawu olulungileyo lwalo naliphi na ishishini.
Iqonga libonelela ngohlaziyo lwasimahla oluhlala lukhona oko kuthetha ukuba inzuzo kubathengi inokubakho. Ezinye zezona zinto zibalaseleyo kwi-Forex Steam efakwe kule robhothi ye-forex zezi:
Uhlengahlengiso kumvuzo womngcipheko
Ixabiso elinye - iinguqulelo ezahlukeneyo
Ngaphezulu kwe-3,000 yabathengi abasebenzayo ngosuku
Umyinge wokuphumelela kwinqanaba 75%
Ukuphepha ukurhweba kakubi usebenzisa 'ukusasazeka okukhulu'
Ukuphuculwa kokumiswa kwetreyini ukuze kusebenze ngcono
Iimarike ezinkulu zihlaziya i-2021 ukuya phambili
Kukho ukhetho lwenguqulo elula yeerobhothi ye-forex, kwabo bakhetha ukukhula iphothifoliyo yabo ngokuthe chu kwixesha elide. Eli qonga lelinye lexabiso eliphantsi kwintengiso.
Into enomdla kukuba abaqulunqi beQhinga loBuchule beRobot ye-Forex ziikhowudi zokwenyani zobomi kunye nabarhwebi. Njengoko igama libonisa ukuba le robhothi ye-forex ijolise kwimarike yokhetho olunambambili. Le yenye yentengiso ebonakala ngathi inenani elikhulu labarhwebi.
Le robhothi ye-forex, nangona kunjalo, inikezela ngeendlela-2 ezakhiweyo malunga nokwahluka- ezi ndlela zokuba 'ligorha' kunye 'nomoya'. Endaweni yokuthengisa iimveliso ezimbini ezahlukeneyo, baphindaphindwe kabini.
Ngokubanzi, ezi ndlela ziyahambelana noninzi lwabarhwebi. Nangona unokufumanisa ukuba xa kufikwa kukhetho lwebhinari uninzi lwabaphuhlisi bemveliso bayakhathala ukwenza ukuba iziphumo zorhwebo zibekhona. Ke iiwebhusayithi zomntu wesithathu ezifana neMyfxbook zisenokungabinakho ukusingatha ezi ziphumo.
Isicwangciso esiliqili se-Forex kwi-robot kwelinye icala sibonelela ngeziphumo mihla le ngetshathi kwiphepha labo lewebhu. Bakwasebenzisa ubuchwephesha obunenkcukacha bokubuyela umva kwimeta-trader 4. Oku kuthetha ukuba inkqubo ivavanywe ngokupheleleyo kangangeminyaka ngaphambi kokuba baqale ukurhweba.
Nalu ulwahlulo oluncinci lwento onokuyilindela kule robhothi ye-forex:
Uhlobo lweerobhothi: Ukhetho lweBhinary
Ixabiso: Ngaphantsi kwe- $ 200
Zonke izibini ezikhoyo
Ixesha elibekiweyo le-M15 (ixesha lokuphelelwa lixesha imizuzu eli-15)
Umyinge we-70-95% yenqanaba lokuphumelela
Le robot ye-forex i-100% i-automated kwaye ibango lokuba abathengisi banako ukwenza inzuzo ye- $ 16,000 ngenyanga. I-Astrobot ye-Forex yenziwe ngumrhwebi owaziwayo we-forex obizwa ngokuba nguRita Lasker.
Le robhothi ye-MT4 ye-forex ikuvumela ukuba uthengise nge-H1, M30 kunye ne-M15 amaxesha amiselweyo kwaye ubandakanya zonke iiperi zemali.
Uya kwaziswa ngalo naluphi na ulindelo olutsha lokurhweba ngeendlela ezi-3: isilumkiso esivelayo seMT4, Isaziso sokutyhala esiselfowuni okanye i-imeyile.
Kukho inkalo yolawulo lwemali ekuvumela ukuba utshintshe ubungakanani beqashiso lakho xa iimeko zentengiso zibonwa zilungile.
Kwimeko yotshintsho olukhulu kwixabiso lamaxabiso, kukho ialgorithm eyakhelweyo ebizwa ngokuba yi 'slippage'. I-Slippage inokuthintela ukuba ungene kurhwebo ngeeparameter ezingachanekanga.
Kuxhomekeke kwintengiso yangoku itekhnoloji yeTakeProfit kule robhothi inika naphina ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuthatha inzuzo. Ezinye zezinto onokuzilindela kwi-Forex Astrobot zezi:
Umyinge wereyithi yokuphumelela ukuya kuthi ga kwi-80%
M15, M30 kunye nexesha elibekiweyo le-H1
Iindleko-ukusuka kwi- $ 100 ukuya kuthi ga kwi-230 yeedola ('kuguqulelo lokugqibela')
Isicwangciso sokumisa emva
Eli qonga likwabonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30, ayinamsebenzi nesizathu sokufuna ukuyeka.
Eli qela linezikhombisi ezi-8 kunye neerobhothi ezi-3 ze-forex, ziiNtlanzi ezinkulu, i-EA Trade Machine kunye neRocket EA. Zontathu ezi 'scalping' iirobhothi kunye neendleko ukusuka kwi-97 ukuya kwi-199 euros.
Akukho lwazi lungako malunga nale robhothi ye-forex, kodwa siza kwenza uhlalutyo oluncinci lweerobhothi ezi-3, nganye inelungelo layo.
Le yayiyirobhothi yesibini ye-forex eyenziwe leli qela kwaye ikwayiqonga le-scalping. Akukho zinkcukacha zininzi malunga nesicwangciso esifumanekayo kule robhothi ye-forex.
I-robot ye-forex iza nezicwangciso ezichazwe kwangaphambili, inyathelo ngenyathelo lomsebenzisi kunye nenkxaso. Ithegi yentengo yeli qonga yi- € 199 engenamkhawulo, kunye ne- € 149 esemgangathweni.
Iimpawu ezithenjiswe nguMatshini wezoRhwebo we-EA zibandakanya:
Ixesha elibekiweyo le-M5
Ixesha lePacific, laseAsia nelaseMelika lokurhweba
Iipenari zemali ze-7
I-20 %-50% yenzuzo enokubakho (ngenyanga)
Isicwangciso sichazwa 'njengorhwebo kwicala lehlabathi'
Le robot ye-forex iyacetyiswa liqela le-Robomaster EU nge-scalping yobungcali. Ungathenga iphepha-mvume elingenamkhawulo nge- € 199 okanye enye nge- € 149. I-Rocket EA ibandakanya ubunzulu bencwadana yemigaqo, 24/7 inkxaso kubathengi kunye nokuseta kwangaphambili iifayile.
I-Rocket EA ye-forex ye-robot iya kuthengisa i-12 zemali ngababini ngexesha elifanayo, oku kwenza ukuba bahluke umngcipheko. Xa kuziwa kwiziphumo zokurhweba kukho i-12 yokubuyela umva eyahlukileyo.
Ezinye zezinto ezinikezelwa yiRocket EA zezi:
Ukurhweba iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezintlanu ngeveki
Ixesha lokurhweba laseAsia
I-10% -20% yenzuzo enokubakho
Iibhanki zemali ezili-15 zokurhweba
Ixesha elibekiweyo le-M15
Intlanzi enkulu ye-EA
Le robhothi ye-forex yenzelwe yonke imeko yentengiso, ijolise ekunikezeleni inzuzo ezinzileyo ngokusebenzisa i-algorithm eguqukayo.
Iindleko zerobhothi enkulu ye-EA ye-Fish yi- € 120 yenguqulo engenamda, kunye ne- € 97 yodwa. Njengomnye u-2 ngeli qela liza neencwadana ezinemigaqo, ukuseta iifayile kunye nenkxaso.
Umboneleli ushwankathele okubonelelweyo kwaye yile nto bayithethayo:
Idalwe kwintengiso ye-USD / JPY
I-10 %-50% yenzuzo enokubakho
Ukurhweba ngokutsala (kuxhomekeke kweliphi icala ohamba kulo)
Ngelishwa, akukho ziphumo zorhwebo zifumanekayo kule robhothi ye-forex.
Njengoko besesitshilo, iirobhothi zangaphambili ziyindlela elungileyo yokuthengisa i-forex ngaphandle kokuchitha iinyanga okanye iminyaka yokufunda indlela yokuthengisa. Itekhnoloji iqhubele phambili kakhulu kangangokuba irobhothi ye-forex iyakwazi ukuthenga nokuthengisa egameni lakho ngelixa uqhubeka nobomi bakho obuxakekileyo.
Soloko uqhubeka ngononophelo nangona kukho uninzi lwabanikezeli besikram abasebenza kwisithuba. Ngethamsanqa, zonke iirobhothi ze-forex esizidwelisile kweli phepha zivela kubanikezeli abasemthethweni. Kodwa, ukuba uthatha isigqibo sokuphuma kolu luhlu-ke qiniseka ukuba wenza uphando kuqala.
Ngokubalulekileyo, ukusebenzisa iakhawunti yeedemo, iziqinisekiso zokubuyisa imali kunye nezilingo zasimahla yindlela esengqiqweni yokufumana iimvakalelo zerobhothi ngaphambi kokuba uhlukane nemali oyisebenzele nzima.